Buuq ka taagan Aqalka Sare iyo Kheyre oo loo diiday inuu furo kulanka | Wardoon
Home Somali News Buuq ka taagan Aqalka Sare iyo Kheyre oo loo diiday inuu furo...
Buuq ka taagan Aqalka Sare iyo Kheyre oo loo diiday inuu furo kulanka
Buuq xooggan ayaa ka dhashay xarunta Aqalka Sare ee baralamanka Soomaaliya, oo qorshuhu ahaa maanta uu ka furmo kalfahdigga 5-aad ee baralamanka.
Senator-ada Aqalka Sare ayaa ku gacan seeray in kulanka uu furmo, ayaga oo kasoo horjeeda ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, oo xarunta u tagay inuu furo kulanka, kadib markii uu soo diray madaxweynaha.
Xildhibaanada ayaa buuq kala hor-tagay ra’iisul wasaaraha, waxayna wacad ku mareen inaysan ogolaan doonin inuu kulanka furo, ayaga oo ku doodaya inay tahay arrin ka baxsan dastuurka.
Dastuurka dalka ayaa dhigaya in kaliya madaxweynaha uu furi karo kalfadhiyada baarlamanka. Madaxweynaha ayaa markii hore qorshuhu ahaa inuu furo kulanka, hase yeeshee xilli dambe ayuu maskaxdiiisa beddelay, oo uu soo diray Kheyre, ayada oo aan la sheegin sababta.
Kulanka ayaa qorshuhu ahaa inuu furmo 9-kii subaxnimo, hase yeeshee illaa iyo hadda oo ay dhaaftay 1-dii duhurnimo ma furmin.
Senator-da badankood ayaa iskaga tagey xaflada furitaanka ayaga oo diidan in Kheyre uu furo kulanka, kaasi oo guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi uu u ogolaaday.
Previous articleAMISOM oo Dawladda Kenya ku eedaysay Inay Dhabar-jebinayso Howlgalka Ciidan ee Soomaaliya
Next articleBanaanbaxyo rabshado wata oo ka socda Muqdisho
Waa kuma seyga cusub ee Ilhan Cumar?
DAAWO:-Dadwayne caraysan oo dhulka dhigay sawirka Deni